यूएईबाट १० हजार रुपैयाँ पठाउँदा झकबहादुर जिसीले पाए १२ लाख उपहार ! - Sidha News
यूएईबाट १० हजार रुपैयाँ पठाउँदा झकबहादुर जिसीले पाए १२ लाख उपहार !
यूएई। यूएईबाट नेपाल पैसा पठाउँदा रोल्पाका झकबहादुर जिसीले १२ लाख रुपैयाँ उपहार पाउनुभएको छ । यूएईको अलअहलिया एक्सचेञ्जमार्फत १० हजार रुपैयाँ पैसा पठाउनुभएका झकबहादुरले एक्सचेञ्जको लक्की ड्र अन्तर्गत १२ लाख रुपैयाँ उपहार पाउनुभएको हो।
बिहीबार आबुधाबीमा खोलिएको लक्की ड्र अन्तर्गत उहाँले उपहार स्वरुप पाएको कारको सट्टा त्यो कारको अहिले यूएईमा पर्ने मुल्य बराबरको नगद रकम अर्थात १२ लाख रुपैयाँ नेपाली पाउनुभएको हो । यूएईमा अहिले निसानको सनी कारको मूल्य झण्डै ४५ हजार दिर्हाम पर्छ । त्यसबाट लाग्ने कर बापतको रकम कटौती गर्दा झण्डैै ४० हजार दिर्हाम अर्थात झण्डै १२ लाख रुपैयाँ हुन आउने अलअहलिया एक्सचेञ्जका नेपाल प्रमुख बेनीमाधब ढकालले बताउनुभयो ।
अलअहलिया एक्सचेञ्जले संसारभर रेमिट्यान्स पठाउने ग्राहकका लागि सन् २०१९ को डिसेम्बर १५ देखि फ्रेबुअरी १२ सम्म एक्सचेञ्जका शाखाबाट पैसा पठाउनेमध्येबाट गोलाप्रथा गरी विजेता छनौट गरिएको हो । योजनाको पहिलो ३ वटा कारका लागि आबुधाबीको इलेक्ट्रा शाखामा बिहीबार गोलाप्रथा गरिएको हो । त्यसमध्ये बाँकी २ कार एक पाकिस्तानी र एक भारतीय नागरिकलाई परेको एक्सचेञ्जले जनाएको छ ।
उपहार अलअहलिया कर्पोरेटले एक कार्यक्रमको आयोजना गरेर संयुक्त रुपमा वितरण गर्ने एक्सचेञ्जका जनरल म्यानेजर कमल सुब्बाले बताउनुभयो ।
१२ लाखले १२ अर्ब भन्दा ठूलो खुशी ल्यायो : झकबहादुर
बिहीबार लक्की ड्र हुँदै गर्दा झकबहादुर कम्पनीको नियमित काम गर्दै हुनुहुन्थ्यो । उहाँ १६ वर्षदेखि आबुधाबीको इमिरेट्स लिक निटको कम्पनीमा इलेक्ट्रिसियनको काम गर्नुहुन्छ ।
आर्मी क्याम्पमा काम गर्दा मोबाइल लैजान नपाईने भएकाले मोबाइल बन्द गरेर उहाँ काम गरिरहनुभएको थियो । लक्की ड्रमा झकबहादुरको नाम निस्किएपछि एक्सचेन्जले उहाँलाई धेरै पटक सम्पर्क गर्ने प्रयास गरेको थियो । तर फोन लागेन ।
क्याम्पमै प्रतिनिधि पठाएर झकबहादुरलाई सम्पर्क गरिएको हो । कम्पनीमै आएर एक्सचेञ्जका प्रतिनिधिले १२ लाख रुपैयाँ जितेको खबर सुनाउँदा पैसामा किन्न नसकिने खुशी मिल्यो भन्नुहुन्छ उहाँ ।
‘मैले १२ अर्बको खुशी पाएँ, म शब्दमा वर्णन गर्न सक्दिनँ,’ झकबहादुरले भन्नुभयो । घर बिदामा गएर दुई महिनाअघि यूएई फर्किनुभएका झकबहादुरले यो योजना अन्तर्गत ४ पटक घरमा पैसा पठाउनुभयो ।
उहाँले पछिल्लोपटक १० हजार रुपैयाँ पठाउनुभएको थियो । एक्सचेञ्जले अब ३ वटा कार सारजाहको अलसज्जा इण्डस्ट्रियल क्षेत्रमा रहेको शाखामा फ्रेबुअरी १६ मा सार्वजनिक गर्नेछ ।
त्यस्तै मेघा प्राइज अन्तर्गत १ किलो सुन र ४ वटा कारको विजेता दुबईको अलकुज शाखामा आउँदो फ्रेबुअरी १७ तारिखमा सार्वजनिक गरिने एक्सचेञ्जले जनाएको छ ।
संकटका बेला निजी अस्पताल पछि हट्नु
कोरोनाले मानिसलाई के सिकाउँदैछ ? संसारलाई
कोरोना भाइरसविरुद्ध लड्न टेकुसहित देशैभर चौधरी
बहराइनमा कोरोना सङ्क्रमित तीन नेपालीको अवस्था
लन्डनबाट नेपाली नर्सको सबै नेपालीलाई अत्यन्तै
मलेसियामा कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या २०३१, मृत्यु हुनेको संख्या २३ पुग्यो
कारोनाबाट लण्डनमा प्रशान्त अर्यालको मृत्यु
रोजगारीका लागि बहराइन गएका तीन नेपालीलाई कोरोना संक्रमण
जापानमा १५ जना नेपाली पक्राउ
अष्ट्रेलियामा नेपालीले आयोजना गरेको लिगमा दुईपक्षबीच झ’डप, एकको अवस्था ग’म्भीर (भिडियो)
‘सिधा कुरा जनतासँग’ कार्यक्रममा म्यानपावरको गुना’शो पोख्ने युवालाई दुबई प्रहरीले समा’त्यो !